Global Voices teny Malagasy » Mandamina Hatrany Ifotony Amin’ny Atrika Atao Amin’Ireo Olan’ny Toekareny i Pôrtô Rikô · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Oktobra 2015 11:30 GMT 1	 · Mpanoratra Carlos Esteban Cana Nandika (en) i Marianna Breytman, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Pôrtô Rikô (Etazonia), Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Sary an'ny mpanoratra ny lahatsoratra.
Nifandamina hiady amin'ny fepetra fitsitsiana napetraky ny governemanta hiatrehana ny olana ara-toekarena  tsy mitsahatra mitombo ireo solontena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ao Pôrtô Rikô.
Maro amin'ireo fepetra ireo no avy amin'ny antsoina hoe “Tatitra Krueger “, nomanin'ny lefitry ny tale jeneralin'ny FMI taloha, Anne Krueger . Takian’ ilay tatitra ny fampihenana ny fandanian'ny fanjakana, ny fanohizana fampitomboana ireo hetra, ary fampihenana ny karama farany ambany, ankoatr'ireo fepetra hafa.
Tamin'ny fahavaratra lasa teo, maro amin'ireo mpikambana amin'ny sehatra sivily no nampiantso hetsika isan-karazany. Ny sasany efa tonga niaraka tamin'ireo sora-baventy tany amin'ny distrika ara-bolan'i Hato Rey ao San Juan renivohitra, raha toa ireo vondrona hafa kosa nivory tany amin'ireo trano fanaovam-pety, kianja, na ireo fivarotam-boky.
Niresaka tamin'ny vondrona #A12J ny Global Voices, izay vondrona nanosika ny fivoriana ny 12 Jolay sy ampahany tamin'ny fihaonana Hetsiky ny Vahoaka, izay natao tao amin'ny Capitol ny 24 Jolay.
Nifanaiky fa hiteny amin'ny teny tokana ireo tsirairay mpikambana tao anatin'ny vondrona.
“Ny vondron'ireo mpanakanto isan-karazany liana hanapoaka ireo dingana ifarimbonana ho fanatsaràna/politika/tononkalo amin'ny fomba misokatra sy voatsinjara no nangataka ilay fivoriana”, hoy ilay vondrona nilaza mikasika ireo tanjon'ny fivoriana.
Voahitsy daholo taorian'ny fivoriana voalohan'ny vondrona ny tanjona, endrika, rafitra ary ireo fitsipiky ny serasera:
Iriana mba hanatanteraka ireo tetikasa mivaingana, ireo asa mivantana, ary ireo fidirana an-tsehatra hafa ny fahasamihafana eo amin'ireo mpandray anjaran'ny #A12J.
Ho “mahaleotena, hatrany ambony ka hatrany ambany ny fomba fikarakaràna. Tsy fikambanana akory ilay fihaonambe amin'ny maha-fihaonambe azy,” hoy ny vondrona.
Tamin'ny fivoriana voalohany, nasongadin'izy ireo ny maha-zava-dehibe ny fampiasana fomba tsy nentim-paharazana hilazan'izy ireo ny heviny:
Fiantsoana fivoriana io, amin'ny ampahany, avy aminy sy ho an'ny vondrom-piarahamonina izay matetika ao anatin'ny vitsy an'isa rehefa miatrika ireo dingana ara-politika mahazatra. Iray amin'ny natolotra io mba hamoronana ireo endrika vaovao amin'ny fifandraisana ara-tsosialy, toekarena vaovao, làlana vaovao ho fanabeazana; izay isainana ireo asa taokantony ho toy ny asa ara-politika aza.
Avy amin'ireo vokatry ny fihaonana voalohany:
Namoaka andianà vondrona hiaraha-miasa ilay fivoriana: mpanohitra-famonjàna; famerenana sy fidirana amin'ireo habaka; sary sy soratra fitarihana ho aminà firenena iray vaovao; orinasa mpamokatra rongony; asa mivantana; ny media; ary vondrona hafa efatra na dimy. Niforona ireo no sady nihaona voalohany tao amin'ilay fivoriana ary eo ampamaritana ireo fivoriana manaraka amin'ny hoavy.
Nomarihany fa tsy nikasa ny hanatratra marimaritra fifanarahana avy amin'ilay fivoriana ry zareo, fa tonga ho azy teo ny iray:
Fantatray isika fa miara-mitarika olona izay efa nobeazina ara-politika sady manana hevitra maro momba ireo hetsika afaka atao na tsy maintsy hatao, raha tsy mbola nanao izany izy ireo. Fiarahamonina iray hafa, misaina sy tsy mahazaka ireo ambaratongam-pitondrana sy ireo kabary fanerena ary ireo fomba fikarakarana. Tsy vita ny hiaraka hanatratra marimaritra iraisana na hanome dieny mialoha ny fijoro ara-politikan'ireo manampahaizana. Rafitra fikarakarana fihaonana miainga avy amin'ny tena no atolotray. Nanontany ny olona tsirairay ny fikambanana mikasika ny làlana aleha hanatanterahana ny asa; Manome fahafahana izany hisian'ny ‘marimaritra’ iray vokarin'ny fandraisana anjaran'ny mpisehatra.
Nilaza izy ireo fa tsy nanantena ny fanjakana handray ireo sosokevitra novokarin'ilay fihaonana;
Tsy handray izany ry zareo, saingy fahefana kely sisa no ananany ankehitriny. Ary ny fahefana kely ananany tsy ampiasainy hanasoavana ny vahoaka, fa hanomezana tombony ny mpamatsy vola. Azo eritreretina fa tsy hanana toerana akory amin'io latabatry ny fifampiresahana io ireo mpitantana ny fanjakana, na iray aza. Eo anelanelan'ireo mpamatsy vola sy ireo dingana politika manerantany sy midadasika be isika. Tsy maintsy mahalala ny tanjaka ananantsika amin'ny maha-olompirenena antsika isika, mifandamina isika samy isika, mitady ireo teboka tena fanindry, ary mamolavola fifandraisana sosialy vaovao sy fomba fiaina izay tsy miankina aminà karazana fandrobàna sy tsy rariny izay vao “hiasa”.
Raha resaka momba ny hoavin'ilay fivoriana, nantintranterin-dry zareo fa tsy manana fisiana ho toy ny fikambanana iray izy io.
“Fa ankehitriny, eo ampanaovana ny asany ireo vondrona sady manomana amin'ny alàlan'ny vovonana/tambajotra iray. Afaka mamonjy vondrona iray ny olona rehetra. Raha toa ka misy vondrona maromaro mieritreritra fa manan-danja na ilaina izany, afaka mitambatra isika amin'ny manaraka hiresaka momba ireo vondrona hafa sady manao drafitra, izay tsy vita raha tsy ifanatrehana.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/01/73651/
 olana ara-toekarena: https://globalvoicesonline.org/2015/08/06/puerto-rico-defaults-on-its-debt-for-the-first-time-in-its-history/
 Tatitra Krueger: http://www.gdbpr.com/documents/puertoricoawayforward.pdf
 Anne Krueger: https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Osborn_Krueger